DEG DEG:Buuhoodle oo xaalad culus lugaha la gashay & Beelo isku sigtay kadib markii wasiir ka tirsan Puntland.
October 16, 2019 Mahad Jama 2
BUUHOODLE(P-TIMES) – Wararka ka imaanaya magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay sheegayaan in ay cirka isku sii shareertay xaalad ka taagnayd deegaankaasi muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan dowladda Puntland ay u tageen magaalada Buuhoodle ka hirgelinta golle deegaan.
Saami qaybsiga golla deegaanka cusub ee degmada Buuhoodle ayaa markii ugu horaysay waxaa ka dhashay khilaaf xoogan iyo kala qaybsanaan dadka deegaanka ah maadaama tirada xildhibaanada la yareeyey markii hore halka markii dambe laga dhigay 27 xildhibaan.
Beelaha qaarkood ayaa durbaba saluug xoogan ka muujiyey saamiyada xildhibaanada gollaha deegaanka Buuhoodle, waxaana gudaha magaalada Buuhoodle ka dhacay shirar iyo kulamo ay hor boodayaan xildhibaano iyo wasiiro si xal waara looga gaadho arintaasi.
Odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha beelaha Buuhoodle qaybtood ayaa warbaahinta ka sheegay in beelaha Buuhoodle qayb kamid ah aysan weli helin xaquuqdoodii isla markaasna aysan aqoonsanaan doonin qorshe walba oo lagu doonayo golle deegaan oo ka hirgala Buuhoodle.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayey ugu baaqeen in uu soo fara galiyo arintani, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in beelaha qaarkood shakhsiyaad kamid ah ay ka dhex hurinayaan dagaalo qabiil oo sabab dhimasho iyo dhaawac.
Qaar kamid ah xildhibaanada cusub ee gollaha deegaanka Buuhoodle ayaa iyaguna wada olole ay ku doonayaan in ay ku hirgaliyaan qorshahooda maamul ee Buuhoodle, waxaana magaalada Buuhoodle ka socda diyaar garow balaadhan oo ay wadaan xubnaha ku tartamaya hogaanka degmada Buuhoodle.
Marka laga yimaado arintani waxaa wararka qaarkood ay sheegaan in dib loo dhigi doono qorshaha dhisida gollaha deegaanka Buuhoodle sababo la xidhiidha khilaafka iyo xurgufta u dhaxaysa beelaha qaarkood si aysan u dhicin dhibaato ka dhex dhalata shacabka Buuhoodle.
HAGAR AMA BARKAD MIDKOOD SIIYA GUDOONKA. SAMANYTA GOLE DEGAAN WAA AASAASKA HORUMARINTA KAABAAASH DHAQAALE. BAL DAAWO GAROWE IYO QARDHO INTA MASHRUUC EE JPLG KA HIRGELISAY. MASHAARIICF BADAN OO U BAAQSATAY GOLE DEEGAAN LA,AAN BAA HELAYSAAN EE DEDEJI SAMAYNTA GOLAHA DEEGAANKA BUUHOODLE.
Horta marka hore waxaa muhiim ah in lagu wada heshiiyo wixii dalka iyo dadkiisa faa’iido u ah.Markii la dhiso gole deegaan oo uu shaqeeyo durba waxbaa laga faa’iidayaa.Haddiisa ay qolo tirahdo anaga reer Hebal ah ma yeelayno in meeshaan laga furo gole deegaan illaa an anagu helno intaas oo jago ah.Halkaas baa lagu waayayaa wax badan oo loo baahnaa.